Na Lorraine, otu ebe a na-eme achịcha na-ere ... chocolate penises maka chocolatepo Valentine'sbọchị - teles relay
Na Lorraine, ebe a na-eme achịcha na-ere ... chocolate penises maka inepo .bọchị
Ebe a na-eme achịcha dị na Stinus, na Niderviller (Moselle), na-enye echiche pụrụ iche na nke a na-adịghị ahụkebe maka ụbọchị ịhụnanya: chocolate penises! Ọrụ ahụ bụ ọfịs igbe: ha na-agbaji.
E nyere na 13 Feb 20 ka 18: 11
Onye na-eme achịcha si Niderviller (Moselle) na-ere mkpịsị chocolate na Valentine'spo Valentine'sbọchị. (© Illustration / CD)
Nke a bụ echiche pụrụ iche nke Valentine en Lorraine : ị nwere ike inye nwunye gị otu chọkọletị chọkọleti. A na-ere achịcha ahịhịa a pụrụ iche na Stinus ebe a na-eme bred, na Niderviller (Moselle), nso Sarrebourg.
Gụọ kwa: Ọhụrụ. Nnukwu ihe eji egwuri egwu mmekọahụ a haziri na Belgium, n'oge na-adịghị anya a na-emepe aha
Echiche sitere na onye isi anụ achịcha
Brice Stinus, onye isi nguzobe ahụ kọwara Akụkọ Lorraine olee ebe ihe okike a sitere:
Otu onye achịcha dị iche iche na-arụrụ anyị ọrụ kemgbe ọnwa Nọvemba gara aga ma nọkwa na-eme nke a n'ụlọ ebe a na-eme achịcha ya na Lutzelbourg. O nyere m ihe mbụ m wee banye na ozugbo. Obi dịkwa ọtụtụ ndị ụtọ.
Ya mere, kemgbe mmalite nke February, mkpịsị chocolate na-achọ ụlọ ebe a na-eme achịcha Stinus mma. Ọrụ ahụ bụ ezigbo ihe ịga nke ọma: "Site na iwu anyị nwere maka ụbọchị ndị na-abịanụ, anyị nwere ike iru 300", na-a Brụrị ọ Brụ Brice Stinus.
Gụọ kwa: Na Moselle, ihe ịga nke ọma dị egwu nke ndị sausaị… na Picon nke onye na-egbu anụ
Nlaghachi maka Motherbọchị Ndị Nne?
Dabere na onye na-eme achịcha ahụ, a ga-ere ahịa ebu na "ụbọchị ole na ole ụbọchị Valentine gasịrị" ma nwee ike ịlaghachi azụ "n'oge oriri, dị ka Ụbọchị mama m".
Nke a ga-abụ ozi ọma maka ọtụtụ ndị ahịa bụ ndị nwere ekele maka ogo nke abụọ nke ọrụ a! Ndị chọrọ inweta ya nwere nzukọ na rue de la Paix na Niderviller, Mọnde ruo Fraịdee site na 6:30 elekere ruo 18:30 p.m., Saturday site na 6:30 elekere anya ruo n’elekere 15 nke ụtụtụ na Sunday site na elekere asaa nke ụtụtụ ruo elekere 7 nke ụtụtụ.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://actu.fr/grand-est/niderviller_57505/en-lorraine-une-boulangerie-vend-penis-chocolat-la-saint-valentin_31467592.html
Alison Hammond kelere ụtụ mmetụta uche dịka nne nwụrụ n'ihi ọrịa imeju na ọrịa kansa
Bitcoin Okpu akhapụ Crudị Ntugharị 2019 Dị Mkpa: Olee Otú Ọ Ga-esi Etu Site Ebe A? Nyocha BTC & Overview